आज बिश्व क्यान्सर दिवस: नेपालमा कस्तो छ क्यान्सरको उपचार ?
आज फेब्रुअरी ४ - विश्व क्यान्सर दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ ।
सामान्यतया हाम्रो शरीरका कोषहरु (cells) अनुशासनमा बस्छन् । तर, विभिन्न कारणले ती कोषहरु एकाएक बढ्ने गर्छन्, जसले गर्दा शरीरमा समस्या आउँछ । यसैलाई क्यान्सर भनिन्छ । क्यान्सरको नराम्रो पक्ष शरीरको एउटा अंगबाट अर्को ठाउँमा सर्नु हो । त्यसरी एक अंगबाट अर्को अंगमा फैलिनुलाई मेटास्टासिस (Metastasis) भनिन्छ ।
क्यान्सर शरीरको जुनसुकै अंगमा हुन सक्छ । पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर धेरै भेटिन्छ । महिलाहरूमा भने पाठेघरको मुख (cervix) र स्तनको क्यान्सर हुने गर्छ ।
किन हुन्छ क्यान्सर ?
यसको उत्तर त्यति सोझो छैन । केही क्यान्सर वंशाणुगत हुन्छन् भने फोक्सो, मुख आदिमा हुने क्यान्सरको धेरैजसो कारण चुरोट र खैनी हो । हामीले हेर्ने क्यान्सरका बिरामीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरैले चुरोट वा खैनी खाने गरेका हुन्छन् । मैले क्यान्सर मात्र हेर्न थालेको ५ वर्षयता चुरोट/खैनी नखाँदा पनि फोक्सो र मुखको क्यान्सर भएका बिरामी निकै कम भेटेको छु । यसको अर्थ चुरोट/खैनी नखाने मान्छेलाई फोक्सो वा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । क्यान्सर गराउने अन्य जोखिमहरूमा मोटो शरीर, प्रदुषित वातावरण, खानामा प्रयोग हुने केमिकल र कीटनाशक लगायत पर्छन् ।
अपरेशन (शल्यक्रिया) काटेर फ्याल्न मिल्ने खालको छ भने क्यान्सरको अपरेशन गरिन्छ । जहाँ रोग छ, त्यो भाग नै काटेर हटाइन्छ । तर, धेरैजसो क्यान्सर काटेर निकाल्न नसकिने अवस्थामा भेटिन्छ । टाउको, घाँटी, रगत वा अरु निकाल्नै नमिल्ने भागमा क्यान्सर भएको छ भने शल्यक्रिया सम्भव हुँदैन ।
किमोथेरापीः क्यान्सरको औषधिलाई किमोथेरापी भनिन्छ । आजकल सयौं प्रकारका किमोथेरापी बनेका छन् । केही क्यान्सर किमोथेरापीबाट सजिलै निको हुन्छ भने केहीलाई त्यसले छुँदैन । हरेक किमोका राम्रा र नराम्रा असर हुन्छन् । किमोले सामान्यतया कपाल झर्छ, वाकवाकी हुन्छ भन्ने सोचिन्छ । तर, सबैले त्यस्तो गराउँदैनन् ।
रेडियोथेरापीः रेडियोथेरापी भनेको रेडियसन (विकिरण) को प्रयोगले क्यान्सरको उपचार गरिने प्रविधि हो । विकिरणलाई अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा अलि बढी तागतका एक्स-रे भनेर बुझ्दा हुन्छ । रेडियोथेरापीको उपचार केही मिनेट, प्रतिदिन, हप्तामा ५ दिन गरेर ६ हप्ता
जति हुन्छ । रेडियोथेरापीलाई हाम्रा बिरामीहरूले ‘सेकाइ गर्ने’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यो शब्द आफैंमा गलत छ, यो उपचार प्रविधिमा बिरामीलाई पोल्ने, दुख्ने केही पनि हुँदैन । रेडियोथेरापी सुरु गरेको २-४ हप्तामा कसैकसैको छाला अलि कालो हुन सक्छ । अरु प्रतिकूल असर के हुन्छन् भन्ने कुरा रेडियोथेरापी कुन अंगमा गरिँदैछ भन्नेमा भर पर्छ ।
नेपालमा क्यान्सरको शल्यक्रिया धेरैवटा अस्पतालमा हुन्छन् र किमोथेरापी पनि धेरै अस्पतालमा लगाउन मिल्ने भएको छ । विश्वमा क्यान्सरको उपचारमा पछिल्लो समय निकै प्रगति भएको क्षेत्र रेडियोथेरापी हो ।
यस बाहेक भक्तपुरमा निजी लगानीमा खुलेको काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा नयाँ प्रविधिको रेडियोथेरापी र किमोथेरापी गरिन्छ । ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा पनि क्यान्सरका सबै उपचार सम्भव छन् । मैले काम गर्ने ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल पनि क्यान्सर उपचारमा लगानी गर्न अग्रसर भएको छ । अहिले अपरेशन र किमोथेरापी सेवा दिइरहेको यो अस्पतालमा रेडियोथेरापी पनि थपियो भने हामी पनि क्यान्सरको पूर्ण रुपमा उपचार गर्न सक्षम हुनेछौं ।
उपचार सेवाको भविष्य
क्यान्सरको उपचारको क्षेत्रमा समयसँगै नयाँ प्रविधि आइरहेका हुन्छन् । केही दशक अघि उपचार नै नहुने भनिएको क्यान्सर बेलामै भेटिए निको हुन थालेको छ । यसैले आगामी समयमा अझ नयाँ प्रविधि, नयाँ औषधि आउनेछन् र क्यान्सरको उपचार झनै सरल बन्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा थप क्यान्सर अस्पतालहरु खुल्ने तयारीमा छन् । भइरहेका अस्पतालले पनि क्यान्सरको उपचार सेवा थाल्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जले धेरै वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको छ । निजामती अस्पतालमा पनि उपचार थालिने भनेको सुनिएको छ । निजामती अस्पतालमै नेपालमा पहिलो पटक बोन-म्यारो प्रत्यारोपण गरेर रक्तक्यान्सरको सफल उपचार पनि सुरु भएको छ । यसरी नै भइरहेका अस्पतालले सेवा सुरु गर्ने र सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पतालहरू देशका विभिन्न भागमा खुल्न थाले भने नेपालमै उपचार सजिलै सम्भव हुनेछ ।
(डा. अधिकारी काठमाडौं, टोखा, धापासीस्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका क्यान्सर विशेषज्ञ हुन्)